जहाँ आमाछोरी उडाउछन् बोइङ ७५७ | Liveekhabar, News Portal website, Nepal No.1 News Portal website, Onlince News Portal website
जहाँ आमाछोरी उडाउछन् बोइङ ७५७
यदि आफ्ना सन्तान ठूलो भएर आफ्नो काममा सघाउँछन् भने त्यो आमाबाबुको सबैभन्दा खुसीको पल हो । यस्तै घटना अमेरिकाको एक उडानको क्रममा देखिएको छ । यहाँ छोरीले आमालाई सहयोग गरेको नभई दुवैले एकसाथ विमान उडाएका हुन् ।
डेल्टाको उडान आमाछोरी मिलेर उडाएका हुन् । उनीहरुको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । उक्त विमान बोइङ ७५७ मोडलको थियो । यो कुरा थाहा पाएर विमानमा सवार सबै यात्रु पनि छक्क परेका थिए । यसमा आमा पाइलट र छोरी फस्ट अफिसर थिइन् ।
स्थानीय समाचारका अनुसार केली रेक्सनकी बहिनी पनि पाइलट हुन् । भाइरल भएको तस्वीरमा आमा–छोरी दुवैजना फ्लाइट डेकमा बसिरहेका छन् । सो अवसरमा डेल्टाले पनि आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डलबाट एक ट्वीट गरेको थियो ।
विमानमा यात्रा गरिरहेका यात्री एम्ब्री रिडलव वल्र्डवाइडका चान्सलर जोन आर वेट्रटले यो तस्वीर खिचेका थिए । उनले उनीहरुको वार्तालापबाट आमाछोरी हुन् भन्ने कुरा थाहा पाएका थिए । उक्त कुरा थाहा पाएपछि उनले भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई सो अवसर प्रदान गरिएको थियो ।
Newer Postविवाह पार्टीमा नचाउने मन छ ? यति तिरे आउछन् यी बलिउड स्टार
Older Postप्रियंकाका श्रीमान निकका सात प्रेमीका (तस्बिर)
जयपुरमा भेटिए भगवान रामका सन्तान, दिए तीनओटा...
…यसकारण सम्बन्धको महत्वपूर्ण हिस्सा हो...
१८ वर्षे जवानीले छुँदा तेरिया मगर भइन यस्ति स...
नेपाल कुशवाहा कल्याण समाजको २८ औं स्थापना दिव...
१३ लाख ६० हजारमा बिक्यो एउटा बाख्रो !...
झुक्किएर पनि मोबाइलमा यी ४ कुरा सेभ नगर्नु :...
अझै पनि मेरो यौन तिर्सना मेटिएको छैन् : सन्नी...
आफ्नो नाम ‘आइफोन सेभेन’ राखी यी व्यक्तिले जिते आइफोनको नयाँ ह्यान्डसेट
युक्रेनका एक व्यक्तिले आफ्नो नाम आधिकारीक रुपमा ‘आइफोन सेभेन’ मा…